နှောင့်နှေးမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
22 / 10 / 2021 22 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 247 Views စာ0မှတ်ချက် 2023, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, Disney, ရုပ်ရှင်, ရုပ်ရှင်, အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်, အင်ဒီယားနားဂျုံးစ် ၅, Lego, Lego ဂိမ်း, Lego ဂိမ်းများ, Lego အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်, Lucasfilm, Lucasfilm အားကစားပြိုင်ပွဲ, Movie,, ရုပ်ရှင်တွေ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း
19 / 10 / 2021 19 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 211 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ထာဝရက Black Panther Wakanda, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego 2022, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ရုပ်ရှင်တွေ, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Marvels, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး
29 / 09 / 2021 29 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 327 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Brad Winderbaum, ဗိုလ်ကြီးဂarter, Covid-19, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel, Marvel, ရာသီ 2, Watcher, တိုနီ Stark, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
14 / 08 / 2021 14 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 274 Views စာ0မှတ်ချက် 76162 အနက်ရောင်မုဆိုးမရဲ့ရဟတ်ယာဉ် Chase, 76187 အဆိပ်, 76199 သတ်ဖြတ်ခြင်း, Black ကမုဆိုးမ, ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်း, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, သံခမောက်, ခမောက်စုဆောင်းခြင်း, Lego, Lego Marvel, Marvel, တုပ်ကွေးရောဂါ, Sony က, Taskmaster, အဆိပ်, အဆိပ် 2, အဆိပ်: သုတ်သင်မှုရှိပါစေ
26 / 06 / 2021 26 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 361 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, 10282 Adidas စူပါစတား, 40486 Adidas မူရင်းစူပါစတား, adidas, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်း LEGO စူပါစတား, Adidas မူရင်းစူပါစတား, Adidas စူပါစတား, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, Lego, Lego Adidas, Lego x Adidas, အွန်လိုင်းတရားဝင် LEGO ဆိုင်, တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုး
13 / 03 / 2021 14 / 03 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 839 Views စာ0မှတ်ချက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, Covid-19, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, ဥယျာဉ်, Lego, ဥပဒေ, Legoland ရေပန်းခြံ, Legoland ရေပန်းခြံ Gardaland, တုပ်ကွေးရောဂါ, ပြန်ဖွင့်, theme ဥယျာဉ်, ရေဥယျာဉ်
11 / 03 / 2021 12 / 03 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 842 Views စာ0မှတ်ချက် အမေရိကန်အိပ်မက်, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, နှောင့်နှေး, Lego, ဥပဒေ, LEGOLAND DIscovery စင်တာနယူးဂျာစီပြည်နယ်, LEGOLAND Discovery စင်တာ, LEGOLAND Discovery Center နယူးဂျာစီ, ကုန်တိုက်, New Jersey , စျေးဝယ်စင်တာ, Shopping Mall